Izingcaphuno zikaGeorge Soros: Izilinganiso zakhe ezihamba phambili ezingama-58 nokuthi Waceba Kanjani | Ezezimali Zomnotho
UClaudi Casal | 13/05/2021 09:00 | Umnotho jikelele
Izazi eziningi zezomnotho sezicebe kakhulu ngenxa yamakhono nezimo zazo zezimali. Phakathi kwabo kukhona uGeorge Soros, umsunguli nomongameli weSoros Fund Management LLC. Okwamanje, ukulingana kwalo zimali kufinyelela kuma-dollar ayizigidi eziyizinkulungwane ezingu-8,6, okumbeka phakathi kwabantu abayikhulu abacebe kakhulu emhlabeni, ngokusho kweForbes. Ngalesi sizathu, kungenzeka ukuthi imishwana kaGeorge Soros ingaba wusizo olukhulu futhi ikhuthaze. Ngokuqondene nemisebenzi yakhe yokusiza, idunyisiwe. Esikhundleni salokho, ukuma kwakhe kwezepolitiki kudale impikiswano enkulu kaninginingi.
Ngaphakathi kwezimakethe zezimali zomhlaba wonke, uSoros ungomunye wabaqageli abakhulu, yingakho enza inotho yakhe. Ngo-1992 wenza ukubheja okudume kakhulu ebhekene nephawundi laseBrithani. Ngenxa yalesi sinyathelo esiyingozi wenza amadola angaphezu kwezigidigidi ngosuku olulodwa. Ngemuva kwalo mcimbi uthole isihloko esithi "indoda eyaphula i-Bank of England". Isikhwama seQuantum asisungula sinezimbuyiselo zaminyaka yonke ezingama-33% iminyaka engaphezu kwamashumi amathathu. Uma ufuna ukwazi imishwana edumile kaGeorge Soros futhi wazi ukuthi ucebe kanjani, ungaphuthelwa yile ndatshana.
1 Imishwana engu-58 ehamba phambili kaGeorge Soros
2 Waceba kanjani uSoros?
2.1 Isikhwama se-Quantum
Imishwana engu-58 ehamba phambili kaGeorge Soros
Osomnotho abakhulu abanjengoGeorge Soros bafikile ezikhundleni zabo ngomsebenzi onzima wokucwaninga nokutshala imali eminyakeni eminingi. Ngaleso sikhathi, wonke umuntu wenze amaphutha lapho afunde khona futhi athuthukisa amasu abo. Futhi, banqwabelene nokuhlakanipha okuningi ngokwengeziwe eminyakeni edlule. Ngakho-ke kunconywa kakhulu ukuthi ubheke ukuthi laba batshalizimali abavelele bathini. Ngokulandelayo sizobona uhlu lwezisho ezingama-58 ezinhle kakhulu zikaGeorge Soros:
“Angiwenzi umsebenzi wami wokupha ngokungenacala noma ngesidingo sokwakha ubudlelwano obuhle nomphakathi. Ngikwenza ngoba ngikwazi ukukwenza, futhi ngiyakholelwa kukho. "
“Ukwenza insangu kube yicala akuzange kuvimbele insangu ekubeni into esetshenziswa kakhulu ngokungemthetho e-United States nakwamanye amazwe amaningi. Kodwa kube nezindleko ezinkulu kanye nemiphumela emibi. "
“Kumele sazi ukuthi, njengamandla amakhulu emhlabeni, sinomthwalo okhethekile. Ngaphezu kokuvikela izintshisekelo zethu zikazwelonke, kufanele sihole ekuvikeleni izintshisekelo ezivamile zesintu. "
“Sekuphinde kwaqubuka isimo sokulwa nobuJuda e-Europe. Izinqubomgomo zokuphatha kukaBush nokuphatha kukaSharon zifaka isandla kulokho. Akuyona eyokulwa nobuJuda ngokukhethekile, kodwa futhi kubonakala ngokulwa nobuJuda. "
“Ngokubona kwami, kunesixazululo esimayelana nentando yeningi, ngoba ohulumeni wentando yeningi bangaphansi kwentando yabantu. Ngakho-ke uma abantu beyifuna, bangasungula izikhungo zamazwe ngamazwe ngeziningi zentando yeningi. "
“Izimakethe zezezimali ngokuvamile azibikezeli. Ngakho-ke kufanele ube nezimo ezehlukene… Umbono wokuthi ungakwazi ukubikezela okuzokwenzeka uzophikisana nendlela yami yokubuka emakethe. "
"Uma isimo siba sibi kakhulu, lapho kuthatha kancane ukusiguqula, kuba ncono kakhulu inzuzo."
"Lapho nje sesibonile ukuthi ukuqonda okungaphelele kuyisimo somuntu, akukho hlazo ngokuba nephutha, kuphela ngokungalungisi amaphutha ethu."
"Ngokuya ngokwanda, amaShayina azophatha umhlaba omningi ngoba azoguqula izinqolobane zawo zamadola nohulumeni waseMelika zibe yizimpahla zangempela."
“Ngenza umbono ojwayelekile wokuthi izimakethe zezezimali azizinzile. Ukuthi sinesithombe esingelona iqiniso uma sicabanga ngezimakethe ezivame ukulingana. "
"Ingxoxo ephelele futhi engenzeleli ibalulekile entandweni yeningi."
'Umthetho usuphenduke ibhizinisi. Ukunakekelwa kwezempilo sekuyibhizinisi. Ngeshwa, ipolitiki nayo isiphenduke ibhizinisi. Lokho kucekela phansi umphakathi. "
"Njengoba nje inqubo yokuqeda ukwenqatshelwa kotshwala kuzwelonke iqale ngokuthi izifundazwe ngazinye zisebenzise imithetho yazo yokwenqabela, izifundazwe ngazinye manje kumele zihole ekusetshenzisweni kwemithetho yokwenqatshelwa kwensangu."
“Amagwebu emakethe yamasheya awakhuli ngokungazelele. Banesisekelo esiqinile empeleni, kodwa iqiniso liphanjaniswa umbono ongaqondile. "
“Uma amaphekula ezwelana nabantu, kunzima kakhulu ukuwathola. Ngakho-ke, sidinga abantu abasohlangothini lwethu, futhi lokho kusiholela ekubeni ngabaholi bomhlaba abanomthwalo, ukukhombisa ukukhathazeka ngezinkinga ezithile. "
"Ukulawulwa kwentela yensangu kungasindisa abakhokhi bentela ngasikhathi sinye izigidigidi zamaRandi ezindlekweni zokuphoqelelwa nokuvalelwa, kuyilapho kuhlinzeka ngemali eyizigidigidi eziningi ngonyaka."
“Ububi obuningi emhlabeni empeleni abuhlosiwe. Abantu abaningi ohlelweni lwezezimali balimaze kakhulu benganakile. "
“Kuyo yonke ikhulu le-XNUMX leminyaka, lapho kwakukhona ukucabanga okungajwayelekile kanye nomthetho onganele, kwaba nezinkinga eziningi zilandelana. Inkinga ngayinye yadala izinguquko ezithile. Yile ndlela ekhula ngayo amabhange amakhulu. "
"Hhayi-ke uyazi, bengingumuntu ngingakabi usomabhizinisi."
“Siyisizwe esinamandla amakhulu emhlabeni. Awekho amandla angaphandle, ayikho inhlangano yamaphekula engasinqoba. Kodwa singabanjwa yisimanga. "
"Ngakhetha i-United States njengekhaya lami ngoba ngiyayazisa inkululeko nentando yeningi, inkululeko yomphakathi kanye nomphakathi ovulekile."
“Abantu abaphethe njengamanje bakhohliwe umgomo wokuqala womphakathi ovulekile, wokuthi singabe senza iphutha nokuthi kumele kube nezingxoxo ezikhululekile. Ukuthi kungenzeka ukuphikisana nezinqubomgomo ngaphandle kokushisekela izwe. "
Ngibona ukungalingani okukhulu emhlabeni. Inkundla yokudlala engalingani kakhulu, ethambekele kabi kakhulu. Ngikubheka njengongazinzile. Ngasikhathi sinye, angiboni kahle ukuthi yini ezoyihlehlisa. "
“Abakholelwa ezimisweni zezimakethe bayabona ukuthi iqhaza likahulumeni emnothweni lihlala liphazamisa, lingasebenzi kahle futhi ngokuvamile linemiphumela engemihle. Lokhu kuholela ekutheni bakholelwe ukuthi indlela yezimakethe ingaxazulula zonke izinkinga. "
«Izisekelo zami zisekela abantu ezweni abakhathalele umphakathi ovulekile. Kungumsebenzi wakho engiwusekelayo. Lapho-ke akusimina engikwenzayo. "
"Izimakethe zihlala zisesimweni sokungaqiniseki nokuguquguquka, futhi imali yenziwa ngokunciphisa okusobala nokubheja kokungalindelekile."
“Iqiniso ukuthi izimakethe zezimali ziyazinza; kwesinye isikhathi bathambekele ekungalingani, hhayi ukulingana. "
"Ukuncintisana okungalawulwa kungaholela abantu ezenzweni abebengazisola ngazo."
Ngubani ozuza kakhulu ngokugcina insangu ingekho emthethweni? Abazuzi abakhulu yizinhlangano ezinkulu zobugebengu eMexico nakwezinye izindawo ezihola izigidigidi zamaRandi minyaka yonke ngalokhu kuhweba okungekho emthethweni, futhi ngubani obengalahlekelwa masinyane yinzuzo yabo yokuncintisana ukube insangu ibingumkhiqizo osemthethweni. "
Izimakethe zenzelwe ukuvumela abantu ukuthi banakekele izidingo zabo zangasese futhi bafune inzuzo. Kungukuqanjwa okuhle impela futhi angisoze ngikubukele phansi ukubaluleka kwako. Kodwa azakhelwanga ukuhlangabezana nezidingo zomphakathi. "
“Uma kukhulunywa ngemiphumela yezenhlalo, banabo bonke abantu abehlukene abenza izinto ngezindlela ezingafani, okunzima kakhulu ukuba nenqubo efanelekile yokuphumelela. Ngakho kuwumsebenzi onzima. "
"Ngenkathi ngenza imali eningi kunale ebengiyidinga mina nomndeni wami, ngasungula isisekelo sokukhuthaza izindinganiso nemigomo yomphakathi okhululekile futhi ovulekile."
"Umphakathi ovulelekile ngumphakathi ovumela amalungu awo inkululeko enkulu ngokulandela izintshisekelo zawo ezihambisana nezintshisekelo zabanye."
“Ngangingalazi igama lale ndoda… Wangiqamba ngempela. Wayengidinga ngezinhloso zakhe zepolitiki, ngakho-ke ngiyingqondo yakhe. "
"Ngakho ngicabanga ukuthi okudingeka ukuthi kwenzeke ukuthi kumele asuswe emandleni."
"Angicabangi ukuthi uzobona iFed igxumela kumazinga wenzalo."
"Ngilindele ukuthi kube nokwehla okuphawulekayo ekusetshenzisweni kwemali yabathengi baseMelika ngo -07, futhi angiboni ukuthi yini ezothatha indawo yayo, ngoba ibaluleke njengenjini yezomnotho emhlabeni."
"Nginikela cishe izigidi ezingama-500 ngonyaka emhlabeni wonke ngikhangisa ngenhlangano evulekile."
"Uzenzela into efanele wena ngoba uhlala emandleni, futhi uzibeka ethubeni lokuthi ukwazi ukutakula ozakwabo abasenkingeni yezezimali, kubandakanya nendodana yakho, njll."
“Ngicabanga ukuthi wonke umqondo wokuqeda inkinga yezidakamizwa umqondo ongamanga,… Ungakudikibalisa ukusetshenziswa kwezidakamizwa, ungavimbela ukusetshenziswa kwezidakamizwa, ungakwazi ukwelapha abantu abayimilutha yezidakamizwa, kodwa awukwazi ukuziqeda . Uma usulamukele leli phuzu, ungakha indlela enengqondo yokubhekana nale nkinga. "
"Bangaphezu kwengxenye amacala engculazi athinta izingane ahlobene ngqo nezinaliti ezingcolile."
"Uma amabhamuza aqukethe ukungaqondi, njengoba kuhlala kwenzeka, ngeke kugcinwe unomphela."
Ngicabanga ukuthi ngilahlekelwe ukuxhumana kwami ​​esikhathini esithile esidlule. Ngifana nomshayi sibhakela osekhulile okungafanele angene eringini. "
'Ubuyanga bokuba semthethweni kwayo sekucacile kimi isikhathi esithile. Ngifunde ngensangu ezinganeni zami futhi ngabona ukuthi ingcono kakhulu kuneScotch, futhi ngangiyithanda iScotch. Ngibe sengiya kudokotela wami wathi: Ngijabule. Awuphuzi kakhulu, ungcono kakhulu uma ubhema insangu kunokuphuza. "
"Siye sabona ukuthi i-hedge fund enkulu njenge-Quantum Fund ayisiyona indlela engcono yokuphatha imali… Izimakethe seziyizinguquko ezinqala kakhulu futhi umlando wezinto ezisengozini ayisasebenzi."
"Unethuba lokuwa kohlelo lonke uma wehla kancane kwezomnotho esikhungweni, noma ingcindezi yokwehla kwamandla emali inyuka… Sisengcupheni yalokho, yebo."
"Kodwa muva nje sibone izimakethe zezezimali zihamba kakhulu njengebhola elibhidlizayo kwesinye isikhathi, zehlisa umnotho ngokulandelana."
"Njengoba kuphakama ukwanda kwezindlu, kuzoba khona ukushoda kwezidingo (ezithinta) umnotho womhlaba."
“Kukhona okuphuke ngempela ekwakhiweni kwezezimali emhlabeni jikelele. Manje sisenyangeni yamashumi amabili yenkinga yezezimali. Kodwa-ke, le nkinga ibisanda kuqala, bekuyinkinga ebilindelwe kakhulu emlandweni wakamuva. "
“Kuze kube yilezi zimali, amazwe anentshisekelo angathola izimakethe zamazwe omhlaba ngamanani akhethekile. Ngaphandle kwalokhu, ababolekisi kuzofanele baqaphele. "
Manje, angikayisebenzisi imininingwane, ngoba angicabangi ukuthi okwami ​​ukwenza imininingwane. Okwabo ukuthi bacubungule imininingwane. "
"Kunenkinga engicabanga ukuthi iyaqala ukwakhiwa, futhi lokho kuphela kokuqhamuka kwezindlu eMelika kanye nokukwazi kwemindeni ukusebenzisa imali engaphezu kwaleyo ayiholayo ngoba inani lekhaya labo liyenyuka."
"Le asymmetry ekwelapheni ababolekisi nababolekayo ingumthombo omkhulu wokungazinzi kohlelo loxiwankulu bomhlaba wonke futhi idinga ukulungiswa."
"Inhloso ukuhlinzeka ngokuphathwa okungcono kakhulu komndeni wami kanye nempahla eyisisekelo engakhanga nakwabanye abatshalizimali abanezinhloso ezifanayo, nokusungula isakhiwo esizohlala isikhathi esingaphezu kwempilo yami."
"Ngicabanga ukuthi kuzodinga ukuthi kukhishwe izimali futhi mhlawumbe kube nephakethe elikhulu ukuletha uzinzo… Konke obekungenziwa kabi kwenziwe kabi."
"Ngikhathazeke kakhulu ngokulingana phakathi kokuthengiselana nokufunwayo, okuqinile kakhulu."
“Ngifuna ukusiza abantu abalimele. Futhi uma ngenza lokho, ngibona sengathi imali yami isetshenziswe kahle. "
AmaJalimane aseyakhohlwa manje ukuthi i-euro ngokuyinhloko yayiyindalo yamaFranco-German. Alikho izwe elihlomule kakhulu kwi-euro kuneGerman, kwezepolitiki nakwezomnotho. Ngakho-ke, okwenzekile ngenxa yokwethulwa kwe-euro ikakhulu kungumthwalo waseJalimane. '
Waceba kanjani uSoros?
Manje njengoba sesifunde amabinzana kaGeorge Soros, sizochaza okuncane ngomkhondo wakhe ukuze siwaqonde kangcono. Ngemuva kobuntwana nobusha obunzima ngesikhathi seMpi Yesibili Yomhlaba, lapho asiza khona uyise ukuqamba amanga emadokhumeni ayekanye nawo eHungary ngesikhathi sokuQothulwa Kwesizwe, uGeorge Soros waqala izifundo zakhe ngo-1947 eLondon School of Economics. Lapho, umeluleki wakhe kanye nefilosofi uKarl Popper wafaka kuye igama elithi 'umphakathi ovulekile', okwakumele okuphambene ngokuphelele nabushiqela ukuthi yena nomndeni wakhe basindile. Ngaphezu kwalokho, leli gama kukhulunywa ngalo kwamanye amabinzana kaGeorge Soros. Eminyakeni emine ngemuva kokuphothula iziqu zakhe, isazi sezomnotho saseHungary sathola umsebenzi kwezezimali eBhange laseLondon.
Ngo-1956, uGeorge Soros wathola umsebenzi wokuba ngumlamuli e-FM Mayer eNew York, wathuthela e-United States. Ngemuva kwemisebenzi eminingana njengomhlaziyi futhi esebenza ezinkampanini ezahlukahlukene zeWall Street, isiHungary sakwazi ukuphatha isikhwama saso sokuqala sogu lolwandle, Isikhwama Sokhozi sokuqala, e-Arnold nase S. Bleichroeder. Ngenxa yokuphumelela kwakhe wakwazi ukwakha isikhwama sesibili asibiza ngokuthi yi-Double Egale Fund.
Eminyakeni eminingi kamuva, ngo-1973, uSoros noJim Rogers, umsizi wakhe, wasungula inkampani iSoros Fund Management. Eminyakeni eyisithupha kamuva nokwakhiwa kwesikhwama se-hedge fund, saqanjwa kabusha ngokuthi yi-Quantum Fund. Kusukela kwaqalwa lesi sikhwama, ukubuya kwakhe kwaba ngu-3,365% futhi wathola imbuyiselo ka-47% ngesikhathi se-SP500 index.
Ngezinga le nkampani entsha elalihamba ngayo, ngo-1981 ukukhula kwayo kwakulingana nama-dollar ayizigidi ezingama-381. Khonamanjalo, inani likaGeorge Soros lalinganiselwa ngaphezulu kwama- $ XNUMX billion. Ngawo lowo nyaka, nini Umtshalizimali Wezikhungo wabona ukuthi isiHungary "siyimenenja enkulu kunazo zonke emhlabeni", UJim Roger uyishiyile inkampani. Futhi lolu hlobo lwezihloko lwenza ukuthi kube kuhle ukuthi ufunde amabinzana kaGeorge Soros. Eminyakeni emine kamuva, ngo-1985, i-Quantum Fund yakhipha imbuyiselo ka-122% kwathi ngo-1986 yeqa ama- $ 1,5 billion.
Ngo-1989, uSoros wanquma ukuqasha uStanely Druckenmiller ukuze aphathe i-Quantum Fund. Uma ubheka phambili ku-1993, ikwazile ukwenza inzuzo yonyaka engama-40%. Kodwa-ke, okwashukumisa inhlanhla kaGeorge Soros kwakuwukusebenza akwenza ephondweni laseBrithani ngo-1992. Le nhlangano yamzuzisa isigidi sezigidi zamarandi, ngaphandle kwenzuzo ayithola kweminye imisebenzi emakethe yamasheya eTokyo, i-lira yase-Italy kanye Umqhele waseSweden. Ngokwezibalo, UGeorge Soros wayesethole ngalowo nyaka cishe amaRandi ayizigidi ezingama-650. Ngemuva kwalokho, waqala ukwehlukanisa utshalomali lwakhe ngokwakha izimali ezintsha zeQuantum.
Njengoba ukwazi ukubona, ukulandela umkhondo kwalesi sazi somnotho bekude futhi kunzima. Kodwa-ke, ngokubekezela nokubekezela ukwazile ukuba ngomunye wabantu abayikhulu abacebe kakhulu emhlabeni. Ngiyethemba ukuthi izingcaphuno zikaGeorge Soros zikukhuthazile futhi zakukhuthaza ukuthi ulandele olwakho uhambo lwezezimali. Ukwazi i-biography yabatshalizimali abadumile abazuze inkululeko yezezimali kungenye yezindlela ezingcono kakhulu zokuziqinisekisa ukuthi nathi singayithola. Ngaphezu kwalokho, ngosizo lwezeluleko zakho kanye nokucabanga kwethu sikuthola kulula okuncane.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Izingcaphuno zikaGeorge Soros